Taariikhda My Butros » Socdaalka baabuur la xayawaankaaga
by Butros Travel
Last updated: Jan. 11 2021 | 5 min akhri
Waad ogtahay waxa ay doonayaan inay sii socoto – sidaas sababta aan iyaga ka qaado?
U hubso in xayawaanka aad tahay qof caafimmad qaba, ballansatid booqasho la dhakhtarka xayawaanka, iyo cusboonaysiiyo kasta oo darbo in ay yihiin sabab. Hotels Qaar ka mid ah hadda waxay u baahan yihiin in aad caddayn muujinaya in record shot xayawaankaaga waa hadda.
U hubso in aad siiso daawo ah aad tagfi iyo sax daawo sida meelaha qaar la mid qashina laga yaabaa in la boodada iyo shillinta. Treatment of heartworm medicine is recommended since mosquitoes can infect your pet.
Hubi kaydkaaga ay: (xirato dhan oo ah alaabtii xayawaanka aad in hal bac yar oo aad ka heli karto waxaa si)
Xadhig A iyo qoorta, a tag magaca xayawaanka (rajeynayaa waxa ay leedahay lambar taleefan u saabsan halka qof jawaabi doonaa, lambarka telefoonka gacanta ee waa weyn).
Biyo caagad, iyo saxanka biyaha ah (Sida doorbidan nooca in uusan ka daadan)
Sahayda cuntada xayawaanka ay, saxan iyo malaha qaadada, oo ha ilaawin dhaqma si ka
Burush xayawaanka A, salaaxid shaambada haddii aad doonaysid in aad tagtay muddo todobaad ah ama ka badan
Toy A ama laba, iyo wax si ay u seexdaan.
Ha illoobin sahayda ay caafimaad:
Qabadeyaal sifaynin burrs
Dhibcood nadiifinta Eye
Qalab xakameeyaan xayawaanka A (sida aad suunka badbaadada kaliya xayawaankaaga)
Bacaha ee soo gaaray ka dib markii xayawaankaaga.
Feed xayawaankaaga cunto fudud dhowr saacadood ka hor inta aadan ka tegin ka dibna ku qaado socod dheer ka hor inta aadan bilaabin safarkaaga.
Waxa ugu horeeya ee ah in la ogsoonaado marka qabashada jirrada oo baabuur waa in 95% of cases it is stress-related and not motion related. Your xayawaanka la xidhiidhi kartaa safar baabuur la la laga qaaday ay guriga ugu horeeya, or trips to the Vet, or even worse, guri eey ka. Sidaas, it’s not surprising that subsequent rides in a car should evoke very strong mental and subsequent physical trauma.
Habdhaqanka Dib-u-barnaamijka xayawaankaaga dhinaca safarka ee baabuur. Raadi park oo ku saabsan 5-10 daqiiqo ka guriga, horseednimo aad leedahay qof kale ee baabuurka, oo dejiyo eyga iyo isaga ka jeedin ka door ah. Dhig faraxsan jidka oo dhan waxaa si park ee. Markii ugu park ka sameeyo waxyaabaha xiiso leh in eey u jecel yahay, qabtee kubada, iyo Erido kalaabka ah. Uma baahna The joogo park uu ku noqon karo in dheer…. kaliya sidii sida ugu macquul ah.Anaga. Then drive the dog home soothing him all the way again and when home makes just as much fuss of the dog as you did at the park. Dhamee fadhiga uu cuntada ama dawayn haddii ay wakhti iyo shuruudaha ruqsadda.
Hadda xayawaankaaga hadda la wadaajinhaynana safarka baabuur la jeer xiiso leh.
Travel on madhan. Waa fikrad fiican ah in aan ku quudiyo xayawaankaaga lix ilaa siddeed saacadood ka hor inta aan la bilaabin safarka wadada a. Lahaanshaha calool madhan yareyn isaga badan tahay ilaa Tuuraysaan, iyo haddii uusan ka heli jiran, waxaa jira cunto ma mataga dhexdiisa, si ugu yaraan ay sahlantahay in la nadiifinta. Siinta biyaha xayawaanka aad, Si kastaba ha ahaatee, ma murugoodo uu caloosha iyo ka dhigi karaa isaga raaxo badan.
Ama in uu quarter-taangiga. Iyadoo fiican xayawaanka guriga qaar safri calool madhan, kuwa kale dareemi doonaa raaxo badan ka dib markaad cunto cunto yar. Xayawaankaaga Qaar ka mid ah kaliya waxay u baahan yihiin cunto yar ee caloosha si ay u caawiyaan uga jiran.
Qaado nasashooyin soo noqnoqda. Inkastoo qaar ka mid ah xayawaanka guriga u safri karaan saacado ayaa dhibaato la'aan, kuwa kale bilaabin queasy qaadan ka dib markii dhowr miles. Get to know your pet’s pattern and stop at least every hour or two to take a quick walk to help your pet get his land legs back. Waxaa kale oo fikrad fiican in isaga shub yar oo biyo ah, tan iyo markii uu ma laga yaabaa in ay dareemaan sida la cabbo marka uu gaariga ku.
Noqo up-hore isaga la. Waxaa dhaqaajinta inta hore ee baabuurka sida in dib u ma, sidaa darteed waxa fiican in aad xayawaanka haddii aad ha loo fuushiyey kursiga hore, laakiin hubi in ay tahay in suunka la daadiyo ama guri eey yar in giijisnaanta galay kursiga sameeyo.
Ballaariyo jahooyinka uu. Xayawaanka, sida dadka, waa yar tahay si aad u hesho carsick markii ay daawan kartaa muuqaal ah maraya.
Kumbyuutarradeedu hoos daaqadaha. Hawada Fresh u fiican yahay qof kasta oo dareen yar carsick ah, oo ay ku jiraan eygaaga ama bisad, laakiin ha fur daaqadda ku filan si uu uga fakan karo ama ka soo heli jidkiisa madaxa.
Isku day qurub dhaqaaq. Dimenhydrinate (Dramamine Qaar) — dadka daroogada isku qaadan reebeyn jirrada baabuur — Waxa kale oo u shaqeeya xayawaankaaga. Dhexdhexaad inaad eeyaha weyn oo waa in la siiyaa 25 si ay u 50 milligram ee Dramamine ugu yaraan saacad ka hor socdaalka, bisadaha iyo eyda yar waa inay qaataan oo ku saabsan 12.5 milligram. U hubso in aad la tasho dhakhtarka xayawaannada ka hor xayawaankaaga kasta Dawadani.
abuuro meel xayawaankaaga si nabad ah ku raaci kara oo weli arki daaqadda oo dibadda ah, oo ay awoodaan inay la taaban aad by. Fadhiga in dhabtaada marka aad wadid ma aha fikrad ugu fiican. Waxay u baahan doonaan in ay helaan biyo ay sidoo.
Buste A ama xayawaan ku sariirta jilicsan weyn ayay ahaan laheyd si ay u dareemaan guriga.
Ha hilmaamin qalab xakameeyaan ah, aadan rabin iyaga ka duulaya muraayada hore haddii aad leedahay si lama filaan ah u joojiyaan.
Haddii aad bisad ayaa la safraya kula ah meel qashinka sanduuq ka sameeyaan. Behind kursiga hore si fiican u shaqaynayaan in baabuurta qaarkood. First, lay down a piece of plastic (Bacda qashinka lagu samayn doonaa).
Safraya DOWN leexdaan
Fursadda in aad xayawaanka seexan doonaa sagaashan boqolkiiba wakhtiga ay aadan arkeynin daaqadda oo dibadda ah ama xayawaanka aad ka helayso.
Waxaad u baahan tahay si ay u joojiyaan kasta 2 si ay u 3 saacadood si ha Fido fidin lugihiisa.
MARNA kaligood ka tagin baabuurka saaran
Modern cars are virtually airtight and a pet left alone in a car is at risk of not getting enough air, or suffering from the heat. Inkastoo heerkulka hawada yahay oo kaliya 70 fashay gaari oo ka dhacay inta qorraxda ka heli kartaa mid aad u kulul.
Habeenkii albeergo A
Waxaan rajeynayaa, you checked the Pet Travel website and booked a pet-friendly hotel or motel online. Haddii hotel / albeergo ku soo eedeeyo lacag xayawaan rabaayad ah u bixiso, ha isku dayin in ay qariso xayawaankaaga, waxaad bixisaan oo habeenkii oo dhan waxaa walwal ku saabsan in la helay.
Marka aad timaaddo weydiiso qolka dabaqa dhulka u dhow meel aad qaadan kartaa socod la Fido. Barxadda xarunta ma aha meel sax ah. U hubso in aad soo qaado dib markii xayawaankaaga si hotel / albeergo wuxuu ahaan doonaa xayawaanka saaxiibtinimo.
Waafajin intooda badan weydii in aadan xayawaanka ka baxo oo keliya qolka sababo cad. You may have to order take-out or room service, or if it is cool enough for your pet to be left in the car for a half-hour or so you could go out to dinner and take them along. You may even find a pet-friendly restaurant, raadiyaan meelaha la meelaha la fadhiisto dibadda sida makhaayadaha maraan.
Waxaad timid meesha aad u socoto
Tus in aad xayawaanka agagaarka gurigooda cusub, halkaas oo aad ka yeellay cuntadooda, biyaha, iyo sariirta.
Haddii xayawaanka waa bisad, ku tusin meesha uu sanduuqa kitty qashinka. Fido u baahan doontaa inaad ogaato meesha uu u socdo dugsiga tagaan iyo weliba.
Hadda waxaad diyaar u tahay inaad ku raaxaysatid fasaxa ah ee shirkadda ee aad saaxiib fiican.
Jacaylka ee 7 Talaabooyinka Easy
Waa maxay sababta aan Waxaad isku daydaa inaad badashid Guy